Kwidziridza Kuunura Kwako neKushambadzira Cloud's Sender Authentication Package | Martech Zone
Mazhinji makambani anotumira email zvechokwadi anofungidzira kuti kuregedza kwakawanda kunogona kukanganisa sangano ravo. E-mail yakanaka, yakavakwa zvakanaka, uye inoshanda zvakanyanya inogona kukwira mune junk folda yemumwe munhu akanyorera uye achishuvira kushandurwa nekambani yako. Mamiriro ezvinhu anotyisa kuva mairi.
Zvakatoipisisa, ungatotadza kuziva kuti maemail ako ari kuendeswa kune zvisina basa kunze kwekunge uri kushandisa yekushandisa inbox yekutarisa. Kurudziro yangu yeiyi vatinoshanda navo pa 250ok, wandinoshandisawo kuongorora kuiswa kwandakaita muinbox. Vanoita izvi kuburikidza nekupa mhando yembeu uye vozoongorora iwo mabhokisi emabhokisi, vobva vakuudza kana email yako yakazviita kune yega yega Internet Service Provider.
Yako email mukurumbira inogona kukanganiswa nechero nhamba yezvinhu, asi yakawanda yacho inouya pasi kune mashanu nyaya:
Configuration - yako domain uye email server yakagadzirirwa kuti ISPs ikwanise kuratidza kuti maemail ari kunyatso kubva kukambani yako?
List - ako email kero akagadziridzwa, anoshanda, uye akasarudzwa muemail yako? Kana zvisiri, mikana yekunzi seSSPAM yakanyanya kukwirira
Mukurumbira - iri kutumira IP inozivikanwa nekutumira SPAM kuburikidza nemishumo isina basa? Yakave yakasarudzwa pamberi?
vhorumu - urikutumira huwandu hukuru hweemail? Yakawanda email inotumira zvachose kukonzeresa kwakasimba kwevanotumira.
gutsikana - une mireza tsvuku ine mazwi auri kushandisa muemail yako? Uri kutumira maemail mazhinji nema URL akaipa, madomeni akave akaomeserwa malware, kana uri kushaya chinongedzo chekuzvinyora mumaemail ako?
Kushambadzira Cloud's Sender Kusimbisa Pakeji
Kana iwe uri kutumira anodarika mazana maviri emakumi mashanu emaimeri pamwedzi uye a Salesforce Kushambadzira Cloud mutengi, iwe unofanirwa kunyatsoisa mari mune yavo Sender Kusimbisa package, inova kurongeka kwakasimba kuona kuti iwe uwedzere kuzadzikiswa kweiyo mameseji kubhokisi rebhokisi. Iyo Sender Kusimbisa Pasuru inopa zvinotevera:
Yakavanzika Domain - Ichi chigadzirwa chinoita kuti iwe uite configure dura rinoshandiswa kutumira email. Iyi domain inoshanda seKubva kukero yeemail yako. Salesforce Kushambadzira Cloud inosimbisa yako email inotumira uchishandisa iyo Sender Policy Sisitimu (SPF), Sender ID, uye DomainKeys / DKIM kuvimbiswa.
Yakatsaurirwa IP Kero - Ichi chigadzirwa chinopa yakasarudzika IP kero kuaccount yako kuti mukurumbira wako uve wako zvachose. Ese mameseji anotumirwa kubva kuaccount yako kuburikidza neKushambadzira Cloud shandisa iyi IP kero. Iyi IP kero inomiririra yakawanda yekutumira kwako mukurumbira.
Pindura Email Management - Ichi chigadzirwa chinodzora mhinduro dzaunogamuchira kubva kune vako vanyore. Iwe unogona kugovera mafirita ekunze-kwe-muhofisi mameseji uye manyore ekuzvinyora zvikumbiro.
Pamusoro pezvo, pasuru yacho inouya ne Accounting Branding, uko Kushambadzira Cloud kunogadzira yako account neako akasarudzwa akavimbika duraini. Ichi chigadzirwa chinoshandura chinongedzo uye kuputira chifananidzo uye chinobvisa zvese zvinongedzo kuKushambadzira Cloud mukufarira yako yakasimbiswa dura.
Sender Kusimbisa Pakeji Vhidhiyo
Dura rako rakavanzika rinogonesa ISPs kuratidza pamwe nekunyatso kutaurirana nyaya newanyoreri kuburikidza nemhinduro zvishwe. Mukati meSender Authentication Package, uchafanirwa kumisikidza yako DNS kuti ugone kugonesa mashoma subdomains ekutumira uye kupindura, pamwe nekiyi yekusimbisa. Iine subdomain kutumwa, inonziwo kutumirwa kwenzvimbo, urikungori kuendesa chikamu chekwako domeini kune Kushambadzira Cloud sechikamu chako chakasarudzika domain kumisikidzwa. Kushambadzira Cloud inongoshandisa yakatsanangurwa subdomain yezviitiko zvakakodzera.
@ sample.domain.com MX Inobvumira email inotumira uchishandisa Kushambadzira Cloud maseva
dauka bounce.sample.domain.com MX Matekete email anotumira uye bounces
pindura pindura.sample.example.com MX Inobvumira Reply Mail Management kubata mafirita uye kutumira mhinduro kumamwe kero
siya leave.sample.domain.com MX Inobvumira vanyoreri kuti varege kuzvinyoresa
mufananidzo image.sample.domain.com CNAME Anonongedza kuMusika Cloud emaseva emifananidzo
maonero view.sample.domain.com CNAME Dzinoratidza Kushambadzira Cloud Kuona SeSeji rewebhu peji
watinya click.sample.domain.com CNAME Dzinoratidza Kushambadzira Cloud Dzvanya URL yekutevera-pinda-kuburikidza
mapeji pages.sample.domain.com CNAME Anongedzera Kushambadzira Cloud microsite uye kumhara peji maseva.
gore cloud.sample.domain.com CNAME Anongedzera Kushambadzira Cloud yegore peji maseva.
mta mta.sample.domain.com A Anongedzera kune yako yakatsaurwa IP Kero
sample.domain.com TXT Inosimbisa DKIM uye DK Sarudzo
@ sample.domain.com TXT SPF1 - SPF chinzvimbo chinopa bounce host mune mfrom kuzivikanwa
dauka bounce.sample.domain.com TXT SPF1 yekubheja inomiririra
pindura pindura.sample.domain.com TXT SPF1 yemhinduro yekugamuchira
Iwe unenge uchinyatsoda kutora wildcard SSL chitupa kune yako domain yeMarketing Cloud kuti ushandise futi. Maakaunzi akagadziridzwa neSAP asingashandisi SSL setifiketi inoratidza yakachengeteka Kushambadzira Cloud dura pane zvivakwa zvemifananidzo mune Zvemukati Muvaki. Paunowedzera chifananidzo kuemail, iyo URL iri mupepeti inoratidza yako yakasarudzika domain setup neSAP. Iyo kopi yekubatanidza pane iyo mifananidzo zvivakwa peji makopi echinyakare domain kuti ishandiswe mumaemail, kumhara mapeji, uye browser.
IP Kero Inodziya
Kamwe iyo Sender Yekusimbisa YePakeji Yakagadziriswa zvizere, iyo inotumira IP kero inofanirwa kunge iri kudziirwa. Izvi zvinozivikanwa se IP Kudziya. Izvi zvinodaro nekuti maIPP haana mukurumbira ane hukama neIP kero yako. Kana iwe ukangotanga kutumira zvese kuburikidza neyakagadziriswa nyowani, pane njodzi huru yekuvharirwa. Mazhinji ekubatanidza kubva kune matsva IP kero ari kuyedza kuburitsa isina kukumbirwa spam kana imwe isingadiwe tsamba, saka ISPs vanofungidzira new IP kero kutumira tsamba.
Unoda rubatsiro here? Ini nevamwe vangu neni Highbridge takaparura yedu chikuva, IP Warm, iyo inonatsa data rako, inoisa pamberi zvaunotumira, uye inokupa iwe nemushandirapamwe wako rondedzero uye mashedhiyo ekudzora chero njodzi yekuendesa zvinhu uye kukurumidza yako mukurumbira wekuendesa.
Iyo hombe ISPs uye webmail vanopa vanokurudzira kuti iwe ugadzire kutumira kutumira kune chero nyowani IP kero nekuderera uye zvine mutsindo kutumira mumavhoriyamu madiki, uye zvishoma nezvishoma kuwedzera vhoriyamu yako yeinodiwa tsamba kune avo vashandisi. Iyi mukurumbira wekutumira unonzi iyo kudziya or kusimudza yekero yako nyowani ye IP.
Chinangwa ndechekuvaka angangoita mazuva makumi matatu enhoroondo yekutumira inodikanwa uye data kuitira kuti ISPs dzive neruzivo rweiyo tsamba inouya kubva kune yako nyowani IP kero. Iyo ramp-up nguva inogona kutora yakareba kupfuura mazuva makumi matatu kune vamwe vatumwa uye ipfupi nguva yevamwe. Zviitiko zvakaita seyako yakazara runyorwa saizi, runyorwa mhando, uye wekunyoresa kubatanidzwa zvinogona kukanganisa iyo nguva yenguva yainotora kuti IP kero yako igozadzwa zvizere.
Kushambadzira Cloud inokurudzira kuti iwe utarise pakutumira kune vako vanonyanya kushandira uye vanobatika kunyoresa panguva ino yakaoma nekuti inogona kuve yekutanga hwaro hweIPs kuona yako anotumira IP kero kutumira mukurumbira. Kukwidza kumusoro kunosanganisira kutumira yakaganhurirwa mameseji paIP pazuva, saka zvingave zvichidikanwa kuti uwedzere kugadzirisa ako azvino ekutumira maitiro sechikamu cheichi chiitiko.
Kana iwe uine mibvunzo kana uchida rubatsiro mukushandisa inbox kuongorora kana kuda rubatsiro mukugadzirisa yako Sender Kusimbisa Pasuru, unogona kukumbira rubatsiro fomu kambani yangu nyowani, Highbridge. Isu tiri mutsva weSalesforce Partner uye takaita basa iri kumazana emasangano. Tinogona kushanda nemumiriri wako weSalesforce uye kuti uwane zvakakwana, kudziirwa, uye kutumira tsamba!
Tags: 250okaccounting yekumakatsika dunhuvakazvipira ipkuburitswadns kumisikidzwaemail brandingkunyanyahighbridgeip mukurumbiraip inodziyaip kupisakushambadzira gorezvakavanzika domainpindura tsamba manejimendisalesforcesapsender yekusimbisa packagessl emailwildcard sslkutumirwa kwenzvimbo